Taona 2017 : tsy fantatra be ihany ny fifidianam-paritra sy faritany | NewsMada
Taona 2017 : tsy fantatra be ihany ny fifidianam-paritra sy faritany
Hisy ihany ve ny fifidianana izay ho filoham-paritra sy ny filoham-paritany amin’ity taona ity? Tsy fantatra be ihany…
Talohaloha teo, ankatoky ny faran’ny taona 2016, efa nandeha ny resaka ny amin’ny mety hanemoran’ny mpitondra ny fifidianana filohan’ny Repoblika ho amin’ny taona 2019, na tapitra amin’ny 25 janoary 2019 aza ny fe-potoam-piasana dimy taona. Tokony ho alohan’io izany ny fifidianana. Izay no mahatonga ny resaka hoe fifidianana amin’ny 2018, tokony ho any amin’ny faramparan’io taona io.
Kajikajy sy paipaika politika ny hanaovana fifidianana amin’ny 2019? Mety ho tafiditra ao anatin’izany ny fandrirarirana lava ny fifidianana lehiben’ny faritra sy ny lehiben’ny faritany. Tadiavina sy apetraka mialoha izay fomba handresena amin’ny fifidianana? Toy ny fanovana ben’ny Tanàna etsy sy eroa, ny fanilihana mialoha amin’ny alalan’ny lalàna efa nahabe resaka talohaloha teo izay kandidà hatahorana…
Tsy azo antoka hoe hanova ny fomba fiasany ny mpitondra sy ny antokony amin’ny hosoka sy hala-bato, fandrahonana, tsy fanajana ny tsiambaratelon’ny fifidianana, fividianana mpifidy… Efa nitranga izany tamin’ny fifidianana ben’ny Tanàna sy ny fifidianana loholona, taona 2015. Ahina vao mainka hihamafy aza izany noho ny fananana traikefa? Na ny fahamehana hitana sy hanohy ny fahefana…
Miantoka ny fampandrosoana ifotony ny olom-boafidy
Tena hanao fampandrosoana ho an’ny vahoaka ifotony sy isam-paritra ve ny fitondrana sa manao izay hitanana sy hanamafisim-pahefana fotsiny? Efa olana ny amin’izay hiandraikitra ny fokontany: hofidina sa hotendrena? Mila hahitsy ny lalàmpanorenana, raha tsy anisan’ny vondrombahoaka itsinjaram-pahefana ny fokontany, nefa hoe ho kitro ifaharan’ny fampandrosoana ifotony.
Zava-doza ho an’ny fitsinjaram-pahefana toy izay iainana amin’izao koa ny tsy fanaovana fifidianam-paritra sy faritany. Lasa eo ambany vahohon’ny fanjakana foibe hatrany ireo rafitra ireo, fa tsy manana tamberinan’andraikitra amin’ny vahoaka izay tokony hifidy ny filohany avy. Ny kaominina sisa no hany tena vondroambahoaka itsinjaram-pahefana, raha tsy fantatra be ihany ny fifidianana filoham-paritra sy faritany.
Mba tsy hihemo-dava na ho tampoka noho ny paipaika sy kajikajy politika ny raharaha, na rehefa ho tapitra ny taona vao hikoropahana. Saika izay hatrany tsinona ny fomba fiasan’izao fitondrana izao…